USudio Nio, ngaphambi kokuthenga ii-AirPods ujonge ezi ntloko | Ndisuka mac
USudio Nio, ngaphambi kokuthenga ii-AirPods ujonge ezi ntloko
Xa savavanya ii-headphone zokuqala zeSudio, saqonda ukuba lo tyikityo wahlukile kwezinye ii-headphone. KwiSudio basebenza ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu awuyi kuba neengxaki ngale ndlela, Baye noyilo lwabo olunomtsalane kwaye ukuba sigxila kumgangatho wesandi / ixabiso lamaxabiso banezimbangi ezimbalwa.
Ezi Sudio Nio intsha zizinto ezininzi ezifunwa ngabasebenzisi kwaye abangafuni kuchitha iindleko zeAirPod zeApple. Ayisiyo ikopi yamaTshayina ngexabiso eliphantsi, zii-headphone ezifanayo kakhulu kuyilo ngokubanzi kwii-AirPods ngandlela zonke, zombini ezobuhle kunye nesandi kodwa ziyahambelana nexabiso esilifunayo.
Thenga iSudio Nio entsha ngoku
1 Ixabiso elimangalisayo phantse isiqingatha se-AirPods
1.1 Umgangatho wesandi seNio
1.2 Ergonomics kunye nokusebenza kweqhosha
1.3 Ukucaciswa okuphambili kweSudio Nio
Ixabiso elimangalisayo phantse isiqingatha se-AirPods
Kwaye akunakwenzeka ukuba ungazithelekisi neApple AirPods ngaphandle kwayo yonke into. Uyilo lwayo oluncinci kwinto esendlebeni, ethe nca kwibhokisi yokutshaja (hayi ngaphezulu kakhulu) kwaye ngakumbi kumgangatho wesandi usenza sibone ii-AirPods ezinophawu lweSudio ebhokisini.
Ukuthetha nokuthetha kakhulu ngexabiso ekugqibeleni yinto ekufuneka sabelane ngayo ... ezi Sudio Nio zixabiso ngee-euro ezingama-69, unazo ziyafumaneka ngemibala eyahlukeneyo: mnyama, luhlaza, mhlophe, luhlaza okwesibhakabhaka kunye nombala wesanti, olu luhlobo lombala wenyama.
Umgangatho wesandi seNio
Asinakuyikhanyela into yokuba kukho ii-headphone ezinikezela ngesandi esiphakamileyo kunye nokuseta okungcono kwesandi kunezi ziNio, kodwa ngokufanelekileyo ixabiso lezi headphone alikho naphi na kwezo zeSudio. Ngale ndlela, uSudio Nio uyahlangana kwaye abayi kukuyekela Ukuba ujonga ii-headphones ezingenazingcingo ezinomgangatho wexabiso elifanelekileyo.
I-bass ilungile, ayigqwethi kwaye amandla eNio aninzi kwaye angaphezulu ngokwaneleyo ukuba angamamela umculo naphina.Nangona kunjalo, khumbula ukuba kuya kufuneka ucime umsebenzi wezokhuseleko weefowuni kwi-iPhone ukuze ufumane ukusebenza okuphezulu okanye mandithi amandla aphezulu.Oko kufumaneka kuseto> Ukhuseleko lweNtloko> Nciphisa izandi ezivakalayo.
Ezi ziimfono-ntloko ezinomtsalane ngokwenene ezinomgangatho ophakamileyo wokumamela kwaye uSudio usisebenzise kakuhle kule nkalo.
Fumana elona xabiso libalaseleyo kwii-headphone zeSudio Nio
Ergonomics kunye nokusebenza kweqhosha
Ngokwam, kum kubalulekile ukuba ii-headphone zihlale ziqhotyoshelwe kuyo nayiphi na imeko kwaye oko kuhlala ndibaleka kwaye ndidlala imidlalo. Ngeso sizathu into entsha USudio Nio enkosi kumabhanti erabha awongezayo kwinxalenye ehlala endlebeni Benza ukuba bangawi, kodwa ukuba awufuni ukusebenzisa iibhendi zerabha bazibambe kakuhle, ziyafana kakhulu nee-AirPod kulo mbandela. Ndilahla ii-AirPods zam kwaye nazo, ngokunjalo kum yirabha kunye nobukhulu bayo obahlukeneyo obongezwa ebhokisini umahluko omkhulu kunye nezo zeApple.
Ukusebenza kweSudio Nio kulula, kulula kakhulu. Nje ukuba sibakhuphe kwibhokisi yokutshaja singasusa iiplastikhi ezantsi kwaye sizikhangele ngokuzenzekelayo kwinethiwekhi yeBluetooth, sizikhetha kwisixhobo kwaye voila ziya kuba sele zilungelelanisiwe.
Umsebenzi wevolumu ezantsi kunye nevolumu uyenziwa kunye Ukulawulwa kokuchukumisa kwaye kubekwe phezulu kwi-earbud nganye. Oku kusithintela ekwenzeni izinto ezingalindelekanga okanye ezingafunekiyo xa sifuna ukubeka ii-headphones umzekelo, ke kum kuluncedo olukhulu.
I-earphone yasekhohlo inemisebenzi yayo kwaye i-earphone yasekunene inayo. kodwa zinokusetyenziswa ngokwahlukeneyo ukuba uyafuna, usebenzisa imisebenzi nganye ngokuzimeleyo. Oku kunokuba yinto encinci yokukhubazeka kuba ukuba sisebenzisa kuphela ilungelo, umzekelo, sinokumisa isikhalazo (njengasekhohlo lodwa), iyasivumela ukuba siqhubele phambili ngengoma kodwa singayibuyisi phantsi kwaye siphakamise ivolumu kodwa hayi yehlise. Oku kunjalo kuba iseti yentloko nganye inemisebenzi yayo.
Le misebenzi ichazwe ngokucacileyo kwibhokisi yeNio kwaye kulula kakhulu ukuyinkqaya. Ukuchukumisa kanye ukuyeka ukudlala, ezimbini ukuqhubela phambili okanye ukubuyela emva kweengoma, ezintathu ukuphakamisa okanye ukunciphisa ivolumu. Yi Kulula kakhulu ukusebenzisa ukubamba kweefowuni.
Ukucaciswa okuphambili kweSudio Nio
I-Sudio Nio ine-IPX4 yokukhuselwa kwamanzi kunye nothuli ke azisetyenziselwa ukusetyenziswa kwamanzi kodwa ziyamelana nemvula kakuhle. Kwelinye icala, kubalulekile ukuba bathi ziyahambelana neMacOS, iOS, Android kunye nasiphi na isixhobo esinonxibelelwano lweBluetooth.
Kwakhona Ukusayinwa bayasiqinisekisa ukuzimela kweeyure ezingama-20 kodwa enyanisweni ziiyure ezi-5 zokusetyenziswa kwii-headphone kunye nezinye ukuya kuthi ga kwi-20 inikezelwa yibhokisi yokutshaja. IneBluetooth 5.0 ifezekisa uluhlu olude ukuya kwiimitha ezili-10, i-USB C yokutshaja izibuko, isebenzisa i-SBC codec, inemakrofoni elungileyo yeefowuni kwaye ayinayo eyayo isicelo.
Umgangatho wesandi namandla
Uyilo olulungileyo kunye nokuphucula irabha yesilicone
Ilula ukudibanisa kunye nokusetyenziswa
Uyilo kunye nexabiso
Abanangxolo yokurhoxisa (ANC)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » USudio Nio, ngaphambi kokuthenga ii-AirPods ujonge ezi ntloko
Isifundo esitsha seApple ngeApple Jonga kunye neCOVID-19
Sele siwazi umhla wokukhutshwa kuthotho lweStephen King yeApple TV +